Top 10 Visualizations maka Windows Media Player n
Top 10 Visualizations maka Windows Media Player
Windows Media Player na-abịa na nza nke na-akpali akpali atụmatụ na otu ndị dị otú mma bụ anya nke na-eme n'aka na onye ọrụ na-kpaliri ịhọrọ na gburugburu ebe obibi n'ime ihe ọkpụkpọ window iji jide n'aka na song a nụrụ na zuru mmụọ na ịnụ ọkụ n'obi. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na anya a họọrọ dị ka kwa usoro na OS chọrọ.
Nkebi nke 1: Top 10 Visualizations maka Windows Media Player
Part 2: Olee otú Tụgharịa na Visualizations na Windows Media Player
Depụtara n'okpuru bụ top 10 visualizations na okwu nke aha, size, obere nkọwa, screenshot na download URL:
1. enwusi agba
Na egwu na ọkaibe ọdịdị a anya na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma nakwa ọkọkpọhi anya ebudatara n'ihi na n'aka dị ka ọdịdị bụ pụtara na ọ na-eme n'aka na nbudata nke faịlụ a enen. The na-agbanwe agbanwe na agba mgbe music a na-egwuri bụ ihe na onye ọ bụla na ihe ọ bụla onye ọrụ chọrọ na a anya na-eme ka n'aka na egwu na-eme n'efu na mkpokọta ọkpụkpọ ọdịdị na-mere oké na stellar.
2. Agba cubes
Ọzọ dị ike na obi na-emetụ n'ahụ visualizations na e kere iji jide n'aka na onye ọrụ na-ịrafu azụmahịa n'ihi na n'aka na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na anya ebudatara si ukara website nke Microsoft iji jide n'aka na ezi na nke kacha mma version bụ n'ebe na-akwado ọkpụkpọ na onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma mgbe ọ na-abịa na-akpọ songs ma ọ bụ ndị ọzọ ọdịyo faịlụ ka ndị kasị mma esesịn e nyere na ụdị nke a anya.
3. Dungeon nnọchibido
Ọ bụkwa otu n'ime visualizations na e mepụtara na-eme ka n'aka na ike ike àgwà nke onye ọrụ na-pacified na nke a. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi pụta dị ka nbudata na echichi na-mere si ukara Microsoft website iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi anya enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Full nke ike na mmụọ a anya na-ahụ na ndị kasị mma e nyere onye ọrụ na onye ala nke nkà mmetụta na-arụnyere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. N'ihi na ndị hụrụ mbara igwe a anya bụ a ere na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e ebudatara na arụnyere dị ka ọ na ukwuu tụrụ aro.
5. G-Force anya
Ọ bụ ezie na ugwo a anya na-atụ aro iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Nbudata na-Otú ọ dị mere site na mpụga njikọ nke e kwuru n'elu na onye ọrụ na-ibugharị ọzọ website a ga-ịga na ya iji jide n'aka na ihe kasị mma e mere na nyere ka onye ọrụ na nke a.
Ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi na-akpọ dị ka ihe amalgamation nke ọtụtụ ndị ọzọ na visualizations na e mepụtara site dị iche iche mmepe na otu na-e sere site size na ọdịdị nke anya. Ọ ga-ebudatara site ndị niile na ndị ọrụ chọrọ ịgbakwunye ihe ọhụrụ na mgbasa ozi ọkpụkpọ enweghị ihe ọ bụla hassle na nke. Ọ bụ doro anya na ihe kasị mma anya na e kere ebi:
7. Soft mbara igwe
Ịmepụta jụụ ambiance n'ihi na onye ọrụ a anya na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi enweghị ihe ọ bụla nke na ọ bụ doro anya n'ihi na ndị niile na ndị ọrụ chọrọ ijide n'aka na nro na onye na-adịghị music na-egwuri na mmekọrita ha na-ahọrọ na mkpokọta gburugburu ebe obibi. The size nke anya bụkwa nnukwu nke pụtara na mkpebi bụ egwu na ọ na-adaba n'ime mgbasa ozi ọkpụkpọ nke ọ bụla genre enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ ga-ebudatara ma wụnye n'otu ntabi dị ka ọ na ukwuu tụrụ aro.
Ọ bụkwa otu n'ime ndị visualizations nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu mgbe ọ na-abịa music nke oke. Nke a bụ nanị maka ndị ọrụ na-achọ ige ntị RAP na hip iwuli elu dị ka mgbanwe ndị e agbakwunyere n'ime anya na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi anya ọrụ na nri oge, ya mere ọ na-gwara ibudata nri anya URL nke e kwuru n'elu na-arụpụta ihe kasị mma.
9. Windows Media 9 usoro
Mepụtara site na Microsoft a anya bụ n'ihi na ndị na-achọ ime n'aka na ọkpụkpọ a nọ dị mfe na pụrụ iche n'otu oge. Ọ bụ ihe kasị mma anya na e mepụtara site na mmepe nke Windows Media Player ya mere ọ ga-atụkwasịkwara ịgbanwe ọdịdị nke ọkpụkpọ jụụ mgbe enweghị Reverting gara aga nsụgharị.
Nke a anya nakwa na e mepụtara site na Microsoft onwe ya na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma e ebudatara na bụghị nanị pụrụ ịtụkwasị obi ma ọ bụ na na akara na chọrọ nke ọkpụkpọ dị ka nke ọma dị ka onye ọrụ.
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a bụ nke dị mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ na-eso na ọ bụla onye ọrụ nwere ike mee ihe nke ọma usoro iji mezuo ọrụ:
1.The Ugbu a na-akpọ window nke Media Player bụ a ga-emeghe:
2.The onye ọrụ kwesịrị mgbe ahụ nri pịa window na hover cursor ka Visualizations taabụ:
3.The onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na chọrọ anya họrọ ka kwa ọchịchọ:
The ngwa ngwa na ụzọ dị mfe ka ihichapụ Windows Update Files
Movavi Video Ntụgharị Alternative maka Windows
Nweta Best ọ bụla Video Converter Ultimate Alternative maka Windows
Windows Iweghachite CD / Disk: A zuru okè ngwọta ka Windows
> Resource> Windows> Top 10 Visualizations maka Windows Media Player